Dardaarankii Nabigeena NNKH : Waxaan idiin dardaarmayaa salaadda iyo wixii ay hanatay (milkisay) gacmihiinu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Nebigu wuxuu jiranaa 18 maalmood oo ay Asxaabtu booqanayeen Xanuunkiisa, Xanuunkii ugu horreeyay wuxuu ahaa Madax-xanuun,habeenkii isniinta ee uu maalinkeeda dhiman doono ayaa xanuunkiisii cuslaaday.
Sayid-Bilaal ayaa aadamay aadaankii salaadda subax wuxuu istaagay albaabka guriga Nebiga, wuxuuna yiri: (Assalamu caleyka yaa rasuululaahi) Faaduma ayaa tiri: 'Rasuulkii Illahey nafsadiisa ayuu ku mashquulsan yahay, markii salaaddii cadaatay ayaa Sayid-Bilaal soo laabtay, wuuna salaamay rasuulka sidii hore oo kale, dhawaaqii Bilaal waxaa maqlay rasuulka wuxuuna yiri: 'soo gal Bilaal', waana soo galay Bilaal isagoo ooyaya Rasuulkuna (SCW) wuxuu yiri Bilaalow jiradii ayaa igu cuslaatay ee ha tujiyo salaadda dadka Abuubakar Sadiiq. Bilaal waa baxay isagoo madaxa gacmaha saaranaya, dhahayana musiibo ayaa noo timid iyo ereyo kale oo la mid ah.
Masjidkii ay uu galay, wuxuuna Abuubakar ku yiri 'Nebigu wuxuu ku amrayaa inaad salaadda tujiso' Abuubakar markii uu arkay mixraabkii uu Nebigu (NNKH) istaagi jiray oo faaruq ah wuu hanan waayay nafsaddiisa waana la miir daboolay waana qeyliyay, muslimiintii oo dhanna wey qeyliyeen, qeyladii ayuu maqlay Nebigu (NNKH) wuxuuna weydiiyay gabadhiisa Faadumo wuxuuna yiri ' Faadumoy waa maxay hugunka iyo sawaxanka yeeraya?' waxay tiri Faadumo 'Muslimiintii ayaa qeylinaya markey ku waayeen'. Rasuulku wuxuu u yeeray Sayid Cali iyo Fadal Bin Cabaas, weyna garba galeen waxeyna geeyeen masajidkii salaaddii ayuuna ka bixiyay asxaabtii, salaaddii kaddib ayuu rasuulku (NNKH) la dardaarmay asaxaabtii wuxuuna yiri: 'Waxaan idiin dardaarmayaa oo aan idiinku sagootinayaa cabsida Illahay iyo inaad adeecdaan oo aad amarkiisa qaadataan anigu waan faaruqayaa (ka tagayaa) adduunyada, maantana waa maalintii iigu dambaysay adduunyada iiguna horreeysay Aakhiro'.
Intaa kaddib Nebiga (NNKH) waxaa la geeyey gurigiisa, Illahay ayaa u waxyooday Malakul-mowt wuxuuna yiri: 'Hoobo (u tag) xabiibkayga (kaan jeclaa) Muxammad (NNKH) uguna tag suurad wanaagsan una dhimri (naxariiso) marka aad ka qaadaysid nafta, markii aad u tagtid idan weydii, haddii uu kuu idmo u gal gurigga balse haddii uu kuu diido ha u galin, kana soo laabo'.
Malakul-mowt wuxuu u tagay Nabigeena Muxammad (NNKH) isagooo u eg nin reer baadiye ah, wuxuuna yiri: 'Assalamu calaykum ma soo galaa?' Faadumo ayaa la hadashay oo tiri: 'Ninyahow rasuulkii illahay wuxuu ku mashquulsan yahay Nafsadiisa'!!
Malakul-mowt mar labaad ayuu ku celiyey salaantii, waxaana maqlay rasuulkii.Rasuulka (NNKH) ayaa Faaduma ku yiri: 'Ma garanaysaa ninka?'. Faaduma waxay tiri: ' Maya' rasuulku wuxuu yiri: 'waa ninka gooya macaanyaalka, kala geeya (kala wada) dadka is jecel, kharaabiya guryaha, camira Qubuurta, ilmaha agoonteeya, naagahana garoobbo ka dhiga, waxaana la yiraahdaa Malakul-mowt'.
Faaduma markay ogaatay in ninku yahay malakul-mowt ayay ooysay, waxayna tiri: ' masiibo ayaa nagu dhacday, waxaana dhimanaya rasuulkii Illahay ee ugu dambeeyey ambiyada, waxaa naga go'ayaa wax'yigii samada ka imaanayey, waxaan weyneynaa hadalkii rasuulkeena, maanta kaddibna maqli mayno salaantii Aabahay.
Rasuulku wuxuu yiri: Faadumoy waxaad tahay qofka ugu horreeya ee aan is haleeleyno (isla kulmeyno)' wuxuu kaloo rasuulku yiri:' malakul'mowdow soo gal' wuuna soo galay malakul'mowt, wuxuuna yiri. 'Assalamu calayka yaa rasuullulaah' rasuulkuna wuxuu yiri 'wacalaykum assalam yaa malakul-mowt, ma waxaad iigu timid inaad i soo siyaarato mise inaad iga qaado nafta?'.Malakul-mowt wuxuu yiri: 'waxaan kuugu imid inaan ku soo siyaarto kaana qaado nafta haddii aad ii idinto, balse haddii aad ii idmi weyso waan iska laabanayaa! Rasuulku wuxuu yiri: 'malakul-mowdow xaggee uga soo tagtay malakul-jibriil. Malakul-mowt wuxuu yiri:'waxaan uga soo tagay samada adduunyada', isla markiiba waxaa yimid malakul-jibriil, wuxuuna fariistay Nebiga madaxiisa, wuxuuna rasuulku yiri: 'miyaadan ogayn in amarkii dhawaaday? Wuxuu yiri:'waan ogahay rasuulkii Illaahayow'.Rasuulku wuxuu yiri: ' iigu bishaarey illaahay agtiisa waxa ii yaala oo karaama ah (wanaag ah)'.
Malakul-jibriil wuxuu yiri: 'albaabada samada waa la wada furay, malaa'igtii illaahayna saf bay galeen iyagoo sugaya ruuxdaada,albaabadii jannada waa la wada furay'. Rasuulku wuxuu yiri: 'iigu bishaaree siday ahaan doontaa ummadaydu maalinta Qiyaamaha?'.Malakul-jibriil wuxuu yiri: 'waxaan kuugu bishaaraynayaa Illaahay inuu yiri: Jannada waan ka xarimay (u diiday) ambiyada illaa Nabi Muxammad (NNKH) galo, sidoo kale jannada waan ka xarimay ummadaha illaahay oo dhan illaa ay ummadda Nabi Muxammad ka galaan'.Rasuulkuna wuxuu yiri: 'hadda ayuu diib noqday (wanaagsanaaday) qalbigaygu, igana suushay murugtii'.
Rasuulku wuxuu yiri: 'malakul-mowdow ii soo dhowow'. Malakul-mowt waa u soo dhawaaday naftii ayuuna ka jiiday illaa ruuxdii ka soo gaarto xudunta.Rasuulku wuxuu yiri: 'maxaa darnaan badiyey xaraaradda (xanuunka) mowdka', wuxuu kaloo yiri: 'malakul-jibriilow ma waxaad dhibsatay fiirinta wijigayga?'. Malakul-jibriil wuxuu yiri ' Illaahay xabiibkiisiyow ayaa awood u leh inuu fiiriyo wajigaaga adigoo sakaraadaya'. Aanas Binu Maalik wuxuu yiri: ' Nabigu markay naftu kabaxaysay wuxuu lahaa: Waxaan idiin dardaarmayaa salaadda iyo wixii ay hanatay (milkisay) gacmihiinu.
Rasuulka waxaa mayray Sayid Cali, waxaa ku shushubayey biyaha fadal bin Cabaas iyo Usaama bin Zayd, waana la karfanay, waana lagu tukaday, waxaana lagu duugay gurigiisii ee qolka Caa'isha (RC,) habeen arbaco ah ayaana la duugay Suubanaha (NNKH.)